China Air ukunwetshwa kushaft Ukukhiqizwa futhi Factory | I-Kangpa
Shaft yokwandiswa komoya
1. Isikhathi sokusebenza kwamandla emali sifushane. Kuthatha kuphela imizuzwana emi-3 ukuhlukanisa nokubeka ishafula lokunwetshwa komoya kanye nethambo lephepha ukuqedela ukwehla kwamandla emali nokwehla kwamandla emali. Akudingi ukuhlukanisa noma yiziphi izingxenye ekugcineni komgodi ukuze uhlanganyele ngokuqinile ithubhu lephepha.
2. Ishubhu lephepha kulula ukuyibeka: ithubhu lephepha lingahanjiswa futhi lilungiswe kunoma yisiphi isikhundla ku-eksisi ngesenzo sokufaka umoya nokuncipha.
3. Isisindo esikhulu esithwala umthwalo: Usayizi we-shaft ubukhulu unganqunywa ngokuya ngezidingo zangempela zamakhasimende, futhi insimbi enobulukhuni isetshenziselwa ukwandisa isisindo esithwala umthwalo.
Shaft umoya ukunwetshwa ihlukaniswe ukhiye uhlobo strip futhi slat uhlobo. I-shaft yokwandiswa komoya ilula kakhulu futhi iyashesha ukusetshenziswa. Idinga kuphela ukulungiselela umthombo wayo womoya. Ingcindezi yomoya ilawulwa ngaphakathi kobubanzi obungu-6-8kg / cm2. Izingxenye zangaphandle (ezinjenge-tube eyakhelwe ngaphakathi eyindilinga), inqobo nje uma isibhamu somoya sigcwaliselwe umbhobho womoya kushaft yomoya, ingaqedwa, futhi izingxenye zangaphandle (ezifana neliyingi lephepha eliyisiyingi) kudingeka kukhululwe lapho iphepha selidedeliwe, cindezela umbhobho womoya ngesandla Izingxenye zangaphandle ezishelelayo (njengebhodlela lephepha eliyindilinga) engxenyeni engenhla zingakhishwa.
4. Ukusebenza kahle kwezomnotho: I-shaft yenzelwe imisebenzi ekhethekile, futhi ingasetshenziselwa zonke izinhlobo zamashubhu wephepha wobukhulu, ukuzaca, ububanzi nokuncipha.
5. Ukugcinwa okulula nesikhathi sokusetshenziswa eside: I-shaft yokwandiswa komoya iyingxenye eyodwa, futhi ingxenye ngayinye esakhiweni sayo inencazelo ehleliwe, engashintshaniswa futhi isetshenziswe, okwenza kube lula ukuyinakekela.
1. Isetshenziswa kabanzi: Njengengxenye eyakhiwe ngokuzimela, ishafula lokunweba lomoya lisuka ku-1 intshi laya ku-12 inches. Ubude nosayizi kunqunywa izidingo zangempela zekhasimende. (Isibonelo, ububanzi obungaphandle obungagcwaliwe besihiji sokwanda komoya esingamasentimitha amathathu singama-74mm, futhi ngemuva kokukhuphuka kwemali ngama-78- 82mm; , noma eminye imishini ehlobene nendawo-egoqwayo, ingakusetshenziswa umoya wokunwetshwa komoya kwemboni yethu.
2. iyonga futhi isebenza kahle: ukwakheka kweshafula kwenzelwe izidingo zomsebenzi zangempela, futhi kungasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamashubhu ahlanganisiwe, njengobukhulu, ububanzi, nokuncipha.
3. Isikhathi sokusetshenziswa eside nokugcinwa okulula: Yize i-shaft yokwandiswa komoya iyinto esekelwa ngomshini, ingxenye ngayinye esakhiweni sayo inencazelo engaguquki futhi ingasetshenziswa ngokungafani, okwenza kube lula ukuyinakekela. Ifektri yethu inezidingo eziqinile kwikhwalithi yazo zonke izingxenye zomshini ongangena, futhi ikhwalithi yomkhiqizo iqinisekisiwe ngokuphelele.
Isesekeli esisodwa: I-shaft yokunwetshwa komoya iyingxenye eyodwa yomshini ogoqayo nowokuphumula. Ingxenye ngayinye esakhiweni sayo inosayizi ongaguquki futhi ingaqedwa futhi ihlanganiswe ukwenza ukugcinwa kube lula futhi kuhlale isikhathi eside.
5. Ubungcweti: Ifektri yethu igxile ekukhiqizeni imiphongolo yokunwetshwa komoya, futhi kunabasebenzi abangochwepheshe bezobunjiniyela nabezobuchwepheshe ocwaningweni lwemakethe ekwakhiweni, ukufakwa nokusetshenziswa kwemiphini yokwandisa umoya.
6. Umthamo omkhulu wokuthwala: Umshini wokunweba womoya ungakhiwa ngokuya ngemodeli yangempela, kusetshenziswa insimbi esezingeni eliphakeme ukukhulisa umthamo wokuthwala. Isibonelo, izinto zensimbi zingakhethwa kulabo abanesisindo sokuthwala esingaphezu kwethani elilodwa.
7.Isikhathi esifushane sokusebenza: Kuthatha kuphela imizuzwana emi-2 ukufuthisa nokususa ithubhu yokugoqa ukuhlukanisa nokubeka ithubhu yokugoqa. Kulula futhi kulula ukubeka ishubhu roll, ephephile futhi esebenzayo. Ingasetshenziswa kuyo yonke imishini nemishini esetshenziselwa ukubopha nokuqaqa. Shaft yokwandiswa komoya. Ubude be-shaft yokukhulisa umoya bungafika kumamitha ayisithupha noma ngaphezulu, kanti ubude obufushane kakhulu bungamamitha ayikhulu ambalwa. Ubude bunqunywa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
8. Ushafula wokunwetshwa komoya wohlobo lwamaketanga unweba iketanga elilodwa, futhi i-fulcrum isakazeka kubha ngayinye yokhiye ukulinganisela amandla, okulungele ukubuyisela emuva ama-athikili ngomshini osindayo.
Umphini wokunwetshwa komoya we-cantilever ungcono kune-shaft ejwayelekile yokunwetshwa komoya ngoba yonke shaft ayidingi ukulayishwa njalo. Okuqukethwe kungasuswa ngemuva kokuchofoza ngqo, ngoba ububanzi bayo abukhulu, ngakho-ke ukusebenza kwemvelo kulula kakhulu. Lokhu kubuye kube wumshini wokunweba womoya okhethwe yimishini eminingi enesisindo esincane nobubanzi obuncane. Inqobo nje uma isibambo esinomoya sigaxekile sibhekane nombhobho womoya kushaft yomoya, umugqa womoya oshibilikayo ungasuswa, futhi iketanga lizobuyela ekubukekeni kwalo kwasekuqaleni.
Uhlaka lwensimbi oluhlanganisiwe lunewindi elimise okwibhokisi elimbiwa ekugcineni okungaguquki kohlangothi lokusebenza lwe-mandrel ye-cantilever ukuqinisekisa ukuqina kwesakhiwo seplatifomu yokuphrinta. Isihlalo esithwalayo sifakwe ngaphakathi kwebhulokhi yensimbi ehambayo, futhi ibhulokhi yensimbi yenziwa ngezingcingo zebhola eliphezulu kakhulu. Iqhutshwa yinduku, indawo ehambayo yenduku yesikulufa isemgqeni ophakathi we-mandrel roller plate, futhi imihlahlandlela eqondile ifakiwe emaphethelweni aphezulu naphansi wewindi elimise okwibhokisi ukulungisa insimbi ehambayo, ukuze qinisekisa ukuqina kwepulatifomu yokuphrinta ekusebenzeni ngesivinini esikhulu.
Kulomklamo, ukulungiswa kwe-mandrel kuyazenzakalela ngokuphelele, futhi ukunyakaza kwayo yonke intambo yesikulufa nokukhiya komphhetho kushiya ngaphandle izici zomuntu. Ibhulashi lensimbi elihambayo ligxile ohlakeni ngojantshi bezinkomba ezihamba phezulu nangaphansi, futhi ngoba induku yesikulufu ihamba emgqeni ophakathi we-mandrel roller plate, umfutho wesilinda esiphakathi nendawo ku-roller ipuleti namandla okushayela eceleni ukuqondiswa kwesikulufa sebhola bobabili basebenze phakathi nendawo maphakathi kwepuleti roll mandrel, kwakheka ingcindezi encane yasendaweni, futhi ngoba umthwalo wamandla usebenza kuphela enkabeni ye-mand roll roll, awukho umzuzu ekusekelweni ifreyimu.
Kunezinhlobo eziningi, kufaka phakathi i-1 intshi, 1.5 intshi, 2 intshi, 2.5 intshi, 3 intshi, 6 intshi, 8 intshi, 10 intshi, 12 intshi, njll. Imiphini yokwandiswa komoya yemininingwane ehlukile nayo ingacutshungulwa futhi ikhiqizwe ngokusho kwamakhasimende izidingo.
Langaphambilini Flat wokubacindezela umshini ahlabayo
Olandelayo: Iglu roller
Air Ukunwetshwa Shaft
I-Hot Melt Glue Isicelo, Okuzenzakalelayo Hot Melt Glue wokulaminetha Machine, Umshini Oshisayo Wokunamathisela Okushisayo Wengubo Yengubo, Umshini Wokunamathisela Okushisayo Wokuncibilika Okushisayo NgeSitifiketi seCe, Umshini Wokunamathisela we-Pur Hot Melt Glue Nonwoven, Umshini Wokushisa we-Pur Hot Melt Adhesive Laminating,